၁၀:၂၉၊ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၄ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၈ လ
ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-တွေအတွက် +များအတွက်, -အဲ၎င်း +အဆိုပါ, -သူ့၏ +သူ၏ , -ပါ တယ် +သည်, -တွေကို +များကို, -မှား+ဟား, -တွေမှာ +များ၌, -သင်္ချာ +သင်္ချာ, -သည့်အထိ +ချိန်ထိ, -တွေဖြစ် +များ ဖြစ်)
၁၀:၁၈၊ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
အရေးမကြီး (ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-ဒီ +၎င်း, -ပါထုတ် +ပါ ထုတ်, -ကိုသုံး +ကို သုံး, -မှုတွေ +မှုများ, -ပါ။ + ဖြစ်သည်, -ခဲ့သလို +ခဲ့သကဲ့သို့, -သလိုပဲ +သည်ကဲ့သို့, -ဟာ +မှာ , -လို့ခေါ် +ဟု ခေါ်, -ဖြစ်ရိုက် +ဖြစ် ရိုက်, -ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ +အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, -ပါဘူး +ချေ, -ပါတယ် +သည်, -တွေနဲ့ +များနှင့်, -ကစတင် +က စတင်, -ရဲ့ +၏, -နဲ့ +နှင့်, -အတွက် +အတွက် , -တဲ့ +သည့်, -သူဟာ +သူသည်))
၁၀:၂၉၊ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အရေးမကြီး (ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-တွေအတွက် +များအတွက်, -အဲ၎င်း +အဆိုပါ, -သူ့၏ +သူ၏ , -ပါ တယ် +သည်, -တွေကို +များကို, -မှား+ဟား, -တွေမှာ +များ၌, -သင်္ချာ +သင်္ချာ, -သည့်အထိ +ချိန်ထိ, -တွေဖြစ် +များ ဖြစ်))
'''ဂျိုးဆက်ဝေဇမ်ဘောင်း''' (Joseph Weizenbaum) အား ၁၉၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်တွင် [[ဘာလင်မြို့]]၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။သူသည် ဂျာမန် အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး [[မက်ဆာချူးဆက် စက်မှုတက္ကသိုလ်]]တွင်ရှိသော ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမှ ပရော်ဖက်ဆာနှင့် စာရေးဆရာဖြစ်သည်။ သူသည် ဂျူးမိသားစုမှ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၁၉၃၅ခုနှစ်တွင် နာဇီဂျာမနီတို့၏ လက်အတွင်းမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး သူ့ ၏မိသားစုသည် [[အမေရိကန်နိုင်ငံ]]ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။
သူသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၁၉၄၁ခုနှစ်က စတင်ပြီး [[သင်္ချာ]] ပညာရပ်ကို စတင်လေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့၏သူ၏ လေ့လာမှုသည် စစ်ပွဲကြောင့် ရပ်ခဲ့ရပြီး ထိုအတောအတွင်း သူသည် စစ်ပွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ရသည်။ ၁၉၅၂ခုနှစ်များ အတွင်းမှာသူသည်ကွန်ပျူတာများနှင့် လုပ်ကိုင် ခဲ့ရပြီး ဝိန်းပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အတွက် ၎င်းဂျစ်တယ်ကွန်ပျူတာကို သူကတီထွင်ပေးကာ ကူညီမှု ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှာ သူသည် ဘဏ်စနစ်အတွက် ပထမဆုံးကွန်ပျူတာကို သုံးစွဲပြီးတော့ General Electric တွင် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ မက်ဆာချူးဆက် စက်မှုတက္ကသိုလ် မှာဝင်ရောက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ်မှာ သူက ELIZA ဟုခေါ်သော ရိုးရှင်းသည့်ပရိုဂရမ်ကို ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းပရိုဂရမ်မှာ ယခုသုံးစွဲနေသည့် chatter bots ဟု ခေါ် သည့်ပရိုဂရမ် ဖြစ်သည် သူ့၏၁၉၇၆သူ၏ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာထုတ်သည့် Computer Power နှင့် Human Reason စာအုပ်မှာ လွှမ်းမိုးမှုရှိသည့် စာအုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည် သူသည်ကွန်ပျူတာတွေကိုသူသည်ကွန်ပျူတာများကို အရေးပါသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခိုင်းဖို့ခွင့်မပြုချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကွန်ပျူတာတွေမှာကွန်ပျူတာများ၌ လူသားများ၌ရှိသည့်အရည်အသွေးများ လူသားတွေမှာရှိသည့်အရည်အသွေးတွေဖြစ်သည့်ဖြစ်သည့် ဉာဏ်ပညာနှင့် ဆက်စပ်တွေးခေါ်ပေါင်းစည်းယူမှုများ မလုပ်နိုင်သည့် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်သည်။ Weizanbaum က SLIP ပရိုဂရမ်ဘာသာရပ် ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ မှာ Weizanbaum ကဘာလင်ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီး သူ့မိဘတွေ နေခဲ့သည့်နေရာမှာ ပြန်ပြီးနေထိုင်ခဲ့သည်။<ref name="lowbio">[http://www.agmb.de/mbi/2003_1/41-43loew.pdf Joseph Weizenbaum&nbsp;–abiography (German)] Wolfgang Löw, Leibniz-Institut für Neurobiologie, Magdeburg, Germany</ref><ref>[http://www.ilmarefilm.org/W_E_2.htm Weizenbaum. Rebel at Work.] Documentary film by Peter Haas and Silvia Holzinger.</ref> Weizanbaum ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်မှာ ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ အဲ၎င်းအဆိုပါ ရုပ်ရှင်ကို ဂျာမနီမှာဖြန့်ချိခဲ့သကဲ့သို့ အင်္ဂလိပ်လိုပါ ထုတ်ဝေပေးခဲ့သည်။<ref name='Information Week'>[http://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=206903443 Remembering Joe Weizenbaum, ELIZA Creator - Artificial Intelligence - InformationWeek]</ref> သူသည်သေဆုံးသည့်အထိဘာလင်မှာရှိသည့်သူသည်သေဆုံးချိန်ထိဘာလင်မှာရှိသည့် အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Institute မှာ သိပ္ပံကောင်စီ၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါ တယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Weizanbaum မှာ MITမှာ လုပ်ကိုင်သည်ကဲ့သို့ မှာ းဗတ်၊ဟားဗတ်၊ စတန်းဖို့လ်နှင့် ဘာလင်တက္ကသိုလ်အပြင် အခြား သောတက္ကသိုလ်တွေအတွက်သောတက္ကသိုလ်များအတွက် လည်း ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သည်။ Weizanbaumမှာ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ဘာလင်မြို့ရှိ ဂျူးသုသာန်မှာ မြေမြှုပ်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူအမှတ်တရနေ့အဖြစ် ဘာလင်မြို့မှာ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/627455" မှ ရယူရန်